I-MRB itholakala eShanghai, eChina.I-Shanghai yaziwa ngokuthi "Oriental Paris", Kuyisikhungo sezomnotho nezezimali saseShayina futhi inendawo yokuqala yokuhweba mahhala yaseShayina (indawo yesilingo sokuhweba mahhala).
Ngemva kweminyaka ecishe ibe ngu-20 yokusebenza, i-MRB yanamuhla isikhule yaba enye yezinkampani ezivelele embonini yokudayisa yaseShayina enezinga elikhulu nomthelela, ihlinzeka ngezixazululo ezihlakaniphile kumakhasimende athengisayo, okuhlanganisa uhlelo lokubala abantu, uhlelo lwe-ESL, uhlelo lwe-EAS neminye imikhiqizo ehlobene.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni angaphezu kwe-100 nasezifundeni ekhaya naphesheya.Ngokusekelwa okuqinile kwamakhasimende ethu, i-MRB yenze inqubekelaphambili enkulu.Sinemodeli yokumaketha eyingqayizivele, ithimba lochwepheshe, ukuphatha okuqinile, imikhiqizo emihle kakhulu nezinsizakalo eziphelele.Ngesikhathi esifanayo, sigxila kubuchwepheshe obuthuthukile, ukusungula izinto ezintsha kanye nocwaningo lomkhiqizo kanye nentuthuko ukuze sifake ubungqabavu obusha kumkhiqizo wethu.Sizibophezele ekuhlinzekeni ngemikhiqizo namasevisi asezingeni eliphezulu futhi ahlukahlukene embonini yokudayisa emhlabeni wonke, nokwenza isixazululo esihlakaniphile esiqondene nawe kumakhasimende ethu okudayisa.
I-MRB itholakala eShanghai, eChina.
I-MRB yasungulwa ngo-2003. Ngo-2006, sasinamalungelo azimele okungenisa nokuthumela ngaphandle.Kusukela yasungulwa, sizibophezele ekuhlinzekeni izixazululo ezihlakaniphile kumakhasimende athengisayo.Imigqa yethu yomkhiqizo ihlanganisa uhlelo lokubala abantu, Uhlelo lwelebula yeshalofu ye-Electronic, Uhlelo Lokubhekwa Kwemibhalo Ye-elekthronikhi kanye nesistimu yokuqoshwa kwevidiyo yedijithali, njll., inikeza izixazululo eziphelele nezinemininingwane zamacala wonke kumakhasimende athengisa emhlabeni wonke.
I-MRB ikhethekile ku-R&D, ukukhiqizwa nokumaketha kwe-People counter, uhlelo lwe-ESL, uhlelo lwe-EAS neminye imikhiqizo ehlobene ethengiswayo.Ulayini womkhiqizo uhlanganisa amamodeli angaphezu kwe-100 afana ne-IR bream people counter, ikhawunta yekhamera ye-2D, ikhawunta yabantu ye-3D, uhlelo lokubala abantu be-AI, Ikhawunta yezimoto, ikhawunta yabagibeli, amalebula eshalofu e-elekthronikhi anosayizi abahlukene, imikhiqizo ehlukene ehlakaniphile yokulwa nokwebiwa kwezitolo. njll.
Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ezitolo, ezitolo zezimpahla, ezitolo ezinkulu, emibukisweni nakwezinye izikhathi.Iningi lemikhiqizo liphumelele i-FCC, UL, CE, ISO nezinye izitifiketi, futhi imikhiqizo izuze ukunconywa ngamakhasimende ngazwi linye.
Kungani ukhetha i-MRB?
1. Umshini Wokukhiqiza Ofanelekayo
Iningi lemishini yethu yokukhiqiza ilethwa ngqo ivela eYurophu naseMelika.
2. Ikhono elihle le-R&D
Asigcini nje ngokuba nabasebenzi bethu bezobuchwepheshe, kodwa futhi sibambisana namanyuvesi ukwenza ucwaningo nokuthuthukiswa komkhiqizo.Ngemizamo eqhubekayo, sigcina imikhiqizo yethu ihamba phambili embonini.
3. Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile phakathi nezingxenye ezi-3 ngaphambi kokuthunyelwa
■ Ukulawulwa kwekhwalithi ye-Core Raw Material.
■ Ukuhlolwa Kwemikhiqizo Eqediwe.
■ Ukulawulwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
4. I-OEM ne-ODM iyatholakala
Sicela usitshele imicabango yakho kanye nezidingo zakho, sizimisele ukusebenzisana nawe ukuze senze imikhiqizo yakho ekhethekile ngokwezifiso.
Abangane bethu abavela emazweni ahlukahlukene oMhlaba.
Ukufunda kabanzi ngathi kuzokusiza kakhulu.
Sebenzisa isipiliyoni sethu seminyaka engu-20 somkhakha ukuze sikuncomele ikhwalithi engcono kakhulu nemikhiqizo ekufanele kakhulu.
Umdayisi kanye nochwepheshe bazokunikeza ububanzi obugcwele bezinsizakalo phakathi nenqubo.
7*24 amahora wokuphendula indlela.
Isevisi yokuqeqeshwa kobuchwepheshe yosekelo lobuchwepheshe
Ukusekelwa kwentengo yokusabalalisa
7*24 amahora ukusekelwa ku-inthanethi
Isevisi yewaranti ende
Inkonzo yokubuyela njalo
Isevisi yokuphromotha umkhiqizo omusha
Isevisi yamahhala yokuthuthukisa umkhiqizo